Miasa amin’ny toby PNNC Seecaline : mifehy ny fandresehan-dahatra ny mpanentana eny ifotony | NewsMada
Miasa amin’ny toby PNNC Seecaline : mifehy ny fandresehan-dahatra ny mpanentana eny ifotony
Miofana momba ny serasera ny mpanentana eny ifotony ho an’ny fanjarian-tsakafo (ACN) 577 eto amin’ny faritra Analamanga. Ilaina ny mifehy ny serasera satria ny fahombiazan’izany no mitarika fanovana fihetsika eo amin’ny reny manatona eny amin’ny toby PNNC/Seecaline maka torohevitra momba ny sakafo ara-pahasalamana, fahadiovana…
Natoro ireo mpanentana ny fomba fandresen-dahatra miaraka amin’ny fitaovana efa eo am-pelatanany hanamoroana ny hafatra tiany hiampita amin’ny reny. Akaiky kokoa ny isan-tokantrano ny mpanentana ary mahafantatra ny mombamomba ny ankohonana rehetra sahaniny.
577 ny toby ho an’ny faritra Analamanga ary tantanin’ny mpanentana avokoa ireo ho an’ny kaominina 146, amin’ny distrika valo. “Natokana ho an’ny mpanentana eny ifotony rehetra ny fiofanana. Efa nahazo ny anjarany ny tany Ankazobe ary hitohy any Anjozorobe sy Andramasina ny fanofanana”, hoy ny tomponandraikitra ao amin’ny ofisim-paritra Analamanga momba ny fanjarian-tsakafo, Andrianarivo Samuel.
Fototra iadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo ny fanovana ny fahazaran-dratsy amin’ny sakafo ka ilaina ny fahaizana mampita ny hafatra mahomby.